GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kikongo Kinyarwanda Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Moore Myanmar Norwegian Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Ukrainian Umbundu Urhobo Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Ihe otu nwa agbọghọ dị afọ iri na isii aha ya bụ Lisette kwuru gosiri na ihe a anyị kwuru bụ eziokwu. Ọ sịrị: “ Ihe a kụziiri anyị n’ụlọ akwụkwọ mere ka m ghọta na mgbe mmadụ na-eto, ọtụtụ ihe na-agbanwe n’ahụ́ ya. Obi siri m ike na ọ bụrụ na ndị na-eto eto amatakwuo ihe na-eme n’ahụ́ ha, ha ga-aghọta na onye ọ na-agụ agụụ ka ya na nwoke ibe ya ma ọ bụ nwaanyị ibe ya nwee mmekọahụ nwere ike imecha tofee ya. Ọ ga-emekwa ka ha ghara ịga nwewe ụdị mmekọahụ ahụ. ”
Anyị mee ihe Baịbụl kwuru, ọ ga-abara anyị uru. O kwuru na ndị ọ na-agụ ka ha na nwoke ibe ha ma ọ bụ nwaanyị ibe ha nwee mmekọahụ kwesịrị ‘ ịgbara ịkwa iko ọsọ ’ otú ahụ mmadụ na-ekwesịghị ikwe ka ya na onye na-abụghị di ya ma ọ bụ nwunye ya dinaa. (1 Ndị Kọrịnt 6:18) Nke bụ́ eziokwu bụ na e nweela ọtụtụ ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ndị na-akwabu iko ma mechaa mụta ịna-ejide onwe ha otú Baịbụl kwuru n’agbanyeghị ụdị ọnwụnwa na-anwa ha. Ndị ọ na-agụ agụụ ka ha na nwoke ibe ha ma ọ bụ nwaanyị ibe ha nwee mmekọahụ ga-ejideli onwe ha ma ọ bụrụ na ha chọrọ ime Chineke obi ụtọ.—Diuterọnọmi 30:19.